सुत्नुअघि मोबाइल तथा ल्यापटप चलाउनु एकदम खतरनाक, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सुत्नुअघि मोबाइल तथा ल्यापटप चलाउनु एकदम खतरनाक
काठमाडौँ । सुत्नुअघि ल्यापटप वा मोबाइल चलाउँदा एकदमै खतरा हुने रहस्य बाहिरिएको छ। अहिले धेरैको बानी नै बनेको छ की सुत्नेबेलामा एक चोटी मोबाइल वा ल्यापटप चलाउनु।
सुत्नु भन्दा अगाडी मोबाइल वा ल्यापटप चलाउदा निन्द्रा नलाग्न सक्छ। जसले तपाईलाई यी ग्याजेटबाट निस्किने सिग्नलले मष्तिष्कलाई उठ्ने संकेत बारम्बार दिने हुँदा सुत्न समेत गाह्रो हुने गर्छ।
त्यस्तै सुत्नु अगाडि खाना खाँदा पनि स्वास्थ्यलाई समस्या पर्ने थालेको छ। रातको खाना सकेसम्म सुत्नु अगाडि खानु हुँदैन। यसरी खाना खानेबित्तिकै सुत्ने गर्नाले मोटोपनको समस्याले दुःख दिन सक्छ।
चुइगम खाने बानीले पनि स्वास्थ्यलाई असर गर्ने गर्दछ। युवाहरूमा चुइगम निकै लोकप्रिय छ र यो एउटा बानीको रूपमा पनि बसिसकेको छ धेरै युवाहरूमा। यदी तपाई सुत्ने बेलामा पनि पेपरमिन्ट फ्लेवरको चुइगम खाने गर्नुहुन्छ भने यसको गन्धले तपाईको निन्द्रा बिथोल्न सक्छ।
त्यस्तै सुत्ने बेलामा किताब पढ्ने बानीले पनि स्वास्थ्यलाई असर गर्ने गरेको छ। केही मानिसहरू सुत्नुभन्दा अगाडि पढ्ने गर्छन्। कुनै कुनै बेला त पढ्ने क्रममा आफ्नो निन्द्रा समेत हराउने गर्छन्। यो भन्दा सुत्नुभन्दा करिब २० मिनेट अगाडि नै किताब पढ्न छोड्नु भयो भने तपाईको निन्द्रा राम्रो हुन्छ।
धुम्रपान सेवन गर्दा त्यसमा रहेको निकोटिन तथा कैफिनले तपाईको निन्द्रा बिथोल्न सक्छ। यसले शरीरमा तनावको स्थिति उत्पन्न गर्छ र निन्द्रा नलाग्न सक्छ।
त्यस्तै चिसो पानीले मुख धुनु पनि समस्या हो। राती सुत्नुभन्दा अगाडि तपाई यदी हात खुट्टा र अनुहार चिसो पानीले धुनुहुन्छ भने यो बानी बदल्नु राम्रो हुन्छ। सुत्नुभन्दा पहिले चिसो पानीले नभई मनतातो पानीले हातमुख धुँदा यसले मांशपेशीको तनाव कम गर्छ र मिठो निन्द्रा लाग्छ।
मध्यपान निन्द्रामा यदी दुई पेग लगाउने बारे सोच्नुहुन्छ भने त्यो बानी हटाउनु राम्रो हुन्छ। अल्कोहलको सेवनले शरीरमा तनाव अधिक हुने गर्छ र निन्द्रामा असर गर्छ।